Mayelana NATHI - Staba Electric Co., Ltd.
Ukuthengisa emazweni angaphezu kuka-60 nezindawo, ezinconywe yimikhiqizo edumile
Umkhiqizi ophezulu we-5 weMikhiqizo ye-AVR eChina abasebenzi abangama-350, indawo yokukhiqiza engama-40,000 ifakwe izikhungo eziphambili
Ikhwalithi efakazelwe nokulethwa
Inkampani ISO9001: 2015 & IMPS GB / T29490-2013 eqinisekisiwe Inqubo QC nokuphathwa
IStaba Electric Co., Ltd. yasungulwa ngo-2010, etholakala eZhongshan, China-ihabhu lezokuthutha leGuangdong-Hong Kong-Marco Greater Bay Area. UStaba ungumkhiqizi ohamba phambili embonini futhi ungumkhiqizo owaziwa umhlaba wonke we-OEM wezixazululo zokulawula kagesi nezikagesi. Imikhiqizo yethu eyinhloko yi-Automatic Voltage Stabilizers (AVR), Amandla kagesi angaPhazanyiswa (UPS), ama-Inverters / Solar Inverters, ama-Motors ama-Small & Medium-Sized Brushless DC Motors, amamojula wokulawula ama-BLDC motors, njll.
I-Staba ine-43,000 sqm yefektri yesimanje ezakhele yona, ene-loop eyinhloko yezindawo zokukhiqiza zifaka:
- Ithuluzi leKhabethe lensimbi & indawo yokusebenzela,
- I-Transformer iron core reeling kanye ne-annealing workshop,
- Transformer emazombezombe nokuhlola workshop,
- PCB ukucubungula nokuhlola workshop,
- Imikhiqizo yokuphakelwa kwamandla inhlangano yokugcina nokuhlola.
Ukukhiqizwa kwaminyaka yonke kufinyelela kuma-PC ayizigidi ezingama-50. Imikhiqizo yethu ithengiselwa emazweni angaphezu kwezi-68 nezifunda emhlabeni jikelele Iningi lamakhasimende ethu amakhulu yimikhiqizo edume umhlaba wonke. Ngo-2019, uStaba wakhethwa njengebhizinisi lesampula ku-National Export Leader Index.
Ngesikhathi sokuthuthuka, uStaba ubhekisisa kakhulu ukuqoqwa kwamalungelo empahla yokusungula nokusungulwa kohlelo lokuphathwa kwebhizinisi. I-Staba yibhizinisi lokuqala esifundeni sethu ukudlulisa ukugunyazwa kwe-IPMS ye-GB / T29490-2013, enamalungelo obunikazi bokusungula ama-4 ase-United States nase-European Union, kanye namalungelo obunikazi wokusungula ase-China angaphezu kwama-58. Kusukela ngo-2014, iStaba ivunyelwe / iphinde yamukelwa njengebhizinisi likazwelonke lobuchwepheshe obuphakeme izikhathi ezintathu zilandelana, sinabanikazi bezikhungo ezimbili zobuchwepheshe: Isikhungo SaseGuangdong Intelligent Power Engineering Technology Center, kanye neZhongshan Power Product Engineering Technology Center. Kusukela ngosuku lokuqala ukusungulwa kwayo, uhlelo lwe-software ye-ERP kanye nohlelo lokuphathwa kwe-ISO9001 sekuqalisiwe kuzo zonke izici zokuphathwa kwezinkampani, okuqinisekisa ukusebenza kahle futhi okuhle kohlelo. Njengamanje, sinabasebenzi abangama-340, abangu-33 babo abangohlelo lwe-R & D kanti abangama-38 abangohlelo lokuphathwa kwezinkampani. Ngasikhathi sinye, sinokubambisana okukhulu nokusebenzisana kokubonisana nezikhungo eziningi zocwaningo kanye nochwepheshe embonini, sizama ukwenza imikhiqizo yethu, izinsizakalo, nobuchwepheshe kube phambili embonini.
I-Staba yinkampani eqhutshwa ngenani, amanani ayo ayisisekelo asebenza kahle kakhulu, emisha, futhi egxile kumakhasimende. Kungenxa yokusebenza kahle okuphezulu lapho iStaba ingathola khona umvuzo ophakeme kunontanga yayo ukuze kutholakale izinsizakusebenza eziningi nenzuzo ku-R & D ukuze inzuzo eyinhloko yeStaba ivikeleke ukuze ibe nokusimama; Ukuqamba ukunakekelwa kobuntu, konke ukukhuthazwa kukaStaba okusha kuvela ekusizeni ababambiqhaza ukuthi bazigcine kanjani izinsiza futhi bazizwe bengcono kunqubo yokwakhiwa - ukukhiqizwa - isiteshi - ukuxhumana nekhasimende; Ukuqondiswa kwamakhasimende kubonisa isimo sikaStaba maqondana nensizakalo kanye namazinga okushisa kwensizakalo kuzo zonke izinqubo.
Vele usinikeze umbono ngokulawulwa kwezimoto nemoto, sizokunikeza isethi ephelele yezixazululo nemoto ephelele oyidingayo. Ngibheke phambili ekusebenzisaneni nawe!
Qala njengefektri encane, gxila kuVoltage Stabilizer & UPS
Umphakeli Oqinisekisiwe Wedwa wePepsi Cola weVoltage Stabilizer
I-workshop entsha ye-8,000 m² Idluliselwe isitifiketi se-ISO9001 Isungule i-1st ultra slim wall mount Mount Voltage Stabilizer
I-Granded China National Hi-tech Enterprise iqinisekisiwe
Ibalwa njengomkhiqizi we-China Top 5 we-Voltage Stabilizer
Kwethulwe uhlobo lwe-Triac Voltage Stabilizer
Qala ukwakha ipaki yezimboni 40,000m²
Isikhungo Esicwaninga nge-Guangdong New Intelligent Power Engineering Technology Center
IStaba Industrial Park isetshenzisiwe, amandla wokukhiqiza aphindwe kabili.
Intellectual property rights management system GB / T29490- 2013 eqinisekisiwe
IStaba BLDC Motor Division isunguliwe
Inkampani ye-PCBA ne-Small Household Appliances Solution isunguliwe
Isithuthuthu, I vacuum cleaner, I-BLDC Fan Motor, Isithuthuthu se-BLDC, Brushless DC Motor, I-Brushless Motor, nophenyo pricelist